IPoland ibhengeza imeko kaxakeka kumda waseBelarus ngenxa yokufuduka ngokungekho mthethweni
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zasePoland » IPoland ibhengeza imeko kaxakeka kumda waseBelarus ngenxa yokufuduka ngokungekho mthethweni
Iindaba zeBelarus Breaking • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • ulwaphulo-mthetho • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • abantu • Iindaba zasePoland • Xanduva • Safety • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Uzwilakhe wase-Belarusian u-Alexander Lukashenko wabhengeza ukuba ulawulo lwakhe alusayi kuphinda luzame ukunqanda abafuduki ukuba bawelele kwi-EU emva kokuba amalungu abo ebeke isohlwayo ngokuchasene ne-Belarus kunyulo lobuqhetseba luka-2020, olwenziwe ngu-Lukashenko.
Inani labantu abafudukela ePoland ngokungekho mthethweni lenyuka ngokuqatha.
Imeko yongxamiseko ibhengezwe kumda wePoland-Belarus.
I-Belarus inceda kwaye ibambe ukufudukela ngokungekho mthethweni ePoland nakwamanye amazwe e-EU.
UMongameli wasePoland uxele imeko yonxunguphalo kwimimandla emibini engqamene neBelarus ngenxa yokuqaqamba kwenani lokuwela umda ngokungekho mthethweni.
Eli lixesha lokuqala kwimbali yasemva kobuKomanisi imeko yongxamiseko yenziwa kumda wayo - Pholend khange azise manyathelo anje, kwaye kuthintelwe ukumisela inyani nangamaxesha anzima obhubhane we-COVID-19, ngaphandle kwento ebiza urhulumente ukuba enze njalo.
Imeko yonxunguphalo iya kuhlala isebenza ubuncinci iintsuku ezingama-30.
"Umongameli uthathe isigqibo sokuba… azise imeko yongxamiseko kwiindawo ezichongwe liBhunga labaPhathiswa," isithethi sikaDuda, uBlazej Spychalski, uxelele inkomfa noonondaba ngoLwesine.
"Imeko kumda neBelarus inzima kwaye iyingozi," utshilo uSpychalski. "Namhlanje, thina njengePoland, sinoxanduva kwimida yethu, kodwa nakwimida ye-European Union, kufuneka sithathe amanyathelo okuqinisekisa ukhuseleko lwePoland ne-European Union."
NgoLwesibini, urhulumente ucele ngokusesikweni uDuda ukuba anyanzelise imeko yongxamiseko kwiindawo ezithile zePodlaskie esePoland kunye neLubelskie kwimida yeBelarus. Umyalelo uya kusebenza kubo bonke oomasipala abali-183 abakufutshane ngqo nomda kwaye baya kuba ngumda wobude beekhilomitha ezintathu kumda weBelarus.
Umlinganiso awuzukuvunywa yindlu esezantsi yepalamente yasePoland - iSejm. Kucwangciselwe ukubiza le nyewe ngolwesiHlanu okanye ngoMvulo, ngokweengxelo zeendaba zasePoland.
Eli nyathelo liza phakathi kokufuduka ngokungekho mthethweni ePoland nakwamanye amazwe aseBaltic ejongene neenyanga ezidlulileyo. Amawakawaka abafuduki abangekho semthethweni ekukholelwa ukuba bahamba besuka kuMbindi Mpuma bawele okanye bazama ukuwela eLatvia, eLithuania nasePoland besuka eBelarus engabamelwane ngelo xesha.
Oonogada bemida yasePoland bathe ngolwe-Lwesithathu ukuba u-Agasti yedwa wabona inani elipheleleyo le-3,500 yemizamo yabafuduki yokungena ePoland bevela eBelarus. Abalindi bathintela iinzame ezingama-2,500 XNUMX ezinjalo.
Olu phuhliso sele lubangele iWarsaw ukuba ithumele amajoni ukuba akhe i-razor-wire barrier ye-2.5 yeemitha ezenzelwe ukolula uninzi lweekhilomitha ezili-150 (93-mile) kunye neBelarus.
The EU owayekhe watyhola iBelarus ngokuzibandakanya "nokuhlasela ngokuthe ngqo" kwi-bloc kunye nokuzama "ukusebenzisa abantu ngeenjongo zezopolitiko" ngokutyhala abafuduki ukuya kwimida yamazwe angamalungu. UVilnius ukwatyhola uMinsk ngokubhabha ngokufuduka kwabantu abavela phesheya kwaye abavalele emngceleni njengemfazwe.